Blog – Samabeshi Khabar
२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार २१:४०२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार २१:४०२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार २१:४० by Samabeshi KhabarNo Comments
काठमाडौं, (ससं) । गायक सन्दिप न्यौपानेले दोहोरी गीत ‘लालुमै’को सफलतापछि ‘सान्बाबु’ लिएर आएका छन् । शिव हमालको सृजनामा बजारमा ल्याइएको ‘लालुमै’ले लोक बजार पिटेको दुई बर्षपछि गायक न्यौपानेले उस्तै प्याटनको दोहोरी गीत ‘सान्बाबु’ल्याएका हुन् । गायक न्यौपानेको दोहोरी गीत ‘लालुमै’लाई यूटुवमा ३ करोड ३६ लाख बढि दर्शकले हेरेका छन् । उनै गायक न्यौपानेले दुई बर्ष पछि ‘सान्बाबु’लिएर बजारमा आएका छन् । न्यौपानेको शब्द र संगीत सिर्जनामा तयार भएको गीतमा सम्झना भण्डारीको स्वरमा साथ छ । यस गीतको म्यूजिक भिडियोमा पछिल्लो समयका चर्चित जुम्ल्याह जोडी स्मारिका र समारिकासँगै गायक सन्दिप न्यौपानेको अभिनय तथा नृत्य रहेको छ । भिडियोको कोरियोग्राफर एवं निर्देशक भने प्रकाश भट्ट हुन् । अमर सुनार यस भिडियोको एसिस्टेन्ट कोरियोग्राफर हुन् । नवराज उप्रेतीको छायाँकन रहेको यस गीतको भिडियोलाई विष्णु शर्माले सम्प...
२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार २०:४७२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार २०:४७२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार २०:४७ by Samabeshi KhabarNo Comments
काठमाडौं, (ससं) । नेपाल तरुण दल, तिलोत्तमा नगर समितिले सञ्चालन गरेको वडा स्तरीय फुटसल प्रतियोगिताको उपाधि वडा नं. ४ ले हात पारेको छ । शनिबार भएको फाइनल खेलमा वडा नं. ४ ले वडा नं. १ लाई पराजित गरेको हो । निकै रोचक भएको खेल ट्राइबेकरबाट विजेताको टुंगो लागेको थियो । वडा नं.४ ले ३/२ गोलको अन्तरले जित हासिल गरेको हो । फागुन २० गतेदेखि सञ्चालन भएको प्रतियोगितामा तिलोत्तमा नगरका १७ वटा वडाका तरुण टिमहरुले भाग लिएको तिलोत्तमा तरुण दल अध्यक्ष खेम क्षत्रीले जानकारी दिए। प्रतियोगिताको उपाधि विजेतालाई नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य एवं संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले प्रमाणपत्रसहित पुरस्कार प्रदान गरेका थिए । विजेताले नगद ३० हजार रुपैयाँ, उपाधि कप, मेडल, प्रमाणपत्र र उपविजेताले नगद १५ हजार रुपैया, कप, मेडल र प्रमाणपत्र पाएका छन् । विधागत रुपमा सर्वोत्कृष्ट खेलाडीको सम्मान ...
२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार १४:३९२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार १४:३९२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार १४:३९ by Samabeshi KhabarNo Comments
धनगढी, (ससं) । धनगढी उप-महानगरपालि -४ चटकपुर स्थित रहेको आलोक मल्टी कन्सर्न प्रा.लि. मा आगलागी भएको छ । आगलागीको कारण खुल्न बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। आगलाागी बाट करोडौंको नोक्सान भएको छ भने आगलागी नियन्त्रणमा प्रहरी, नेपाली सेना लगायतका शुरक्षा निकाय हरु प्रयासरत छन् । अहिलेसम्म आगलागी नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन।...
२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार १४:३४२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार १४:३४२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार १४:३४ by Samabeshi KhabarNo Comments
प्रमुख समाचार, ब्यानर, स्वास्थ्य
काठमाडौं, (ससं) । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएर दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु गर्ने भएका छन् । आइतबार बिहान १० बजे महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले खोप लगाउने बताइएको छ । भोलिदेखि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुले समेत खोप लगाउने बताइएको छ । आइतबारबाट ६ हजारभन्दा बढी खोप केन्द्रबाट दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरू हुँदैछ । यो चरणमा ६५ वर्षमाथिका १६ लाख नागरिकलाई खोप लगाउने योजना छ । १५ वटा हिमाली जिल्लाका ५५ वर्ष माथिकालाई पनि आइतबारदेखि नै खोप लगाइने छ ।...
२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार १४:२०२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार १४:२०२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार १४:२० by Samabeshi KhabarNo Comments
काठमाडौं, (ससं) । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वास पात्र हुन्। उनी प्रधानमन्त्री ओलीले गर्ने कुनै पनि कामको विरोध गर्दैनन्। उनले आज शनिबार आफ्नो फेसबुकमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका केही दूरगामी महत्वका कामहरू भनेर लेखेका छन्। तर, पनि ओली चौतर्फी घेराबन्दीमा रहेको उनले बताएका छन्। ‘पार्टी एकता संकटग्रस्त बनेको छ। राष्ट्रिय राजनीति पुनः अस्थिर र अन्योलग्रस्त बनाइँदैछ। सबै पक्ष गम्भीर र जिम्मेवार बनौं,’ उनले भनेका छन्। पोखरेलको नजरमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका असाधारण र दूरगामी महत्वका कामको सूची यस्तो छ। 1 विश्वास गुमेको अवस्थामा संविधानसभाबाट नयाँ संविधानको निर्माण,2जातीय, क्षेत्रीय अतिवाद र विखण्डनवादको वैचारिक रुपमा सामना,3भारतीय नाकाबन्दीको सामना र सफलता,4चीनसँगको ऐतिहासिक पारवान सम्झौताबाट भविष्यमा नाकावन्दी नहुने परिस्थितिको निर्...
२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार १३:२२२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार १३:२२२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार १३:२२ by Samabeshi KhabarNo Comments
प्रमुख समाचार, ब्यानर, राजनीति
काठमाडौं, (ससं) । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकालले विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएसँगै अब नेपालको पर्यटनले फड्को मार्ने बताएका छन्। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको ४४ औं वार्षिक साधारणसभाको शुक्रबार राति उद्घाटन गर्दै उनले फागुन २१ गतेदेखि नेपाल पूर्णरूपमा शान्तिको देशका रूपमा रुपान्तरण भएको र नेपालमा कोभिड-१९ विरूद्धको खोप अभियान पनि सञ्चालन भइरहेकाले विदेशी पर्यटक बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने,‘हामीले योबीचमा दुई अध्याय पूरा गरेर सिके राउतलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्यायौं, त्यस्तै पछिल्लो पटक विभिन्न खालका विद्रोह र हिंसाको राजनीतिमा लागेको विप्लव समूहलाई पनि मूलधारमा ल्याएका छौं, यसले समाजमा रहेको भय र आतङ्कलाई अन्त्य गरेको छ, अब मुलुकमा पर्यटकले निर्वाधरूपमा हिँडडुल गर्न समस्या छैन।’ सरकार र विप्लव समूहबीच तीन बुँद...
२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार १३:१९२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार १३:१९२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार १३:१९ by Samabeshi KhabarNo Comments
काठमाडौं, (ससं) । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला पुरस्कार’ प्रदान गरिने घोषणा गरिएकी किशोरी मुस्कान खातुनलाई बधाई दिएकी छन् । शनिबार ट्वीटगरी राष्ट्रपति भण्डारीले तेजाब आक्रमणको असह्य पीडालाई खातुनले शक्तिमा बदलेकामा प्रशंसा गर्दै बधाइ दिएकी हुन् । ‘एसिड आक्रमणको असैह्य पीडालाई शक्तिमा बदल्दै यस जघन्य अपराधविरुद्ध कडा कानुन र सजायका लागि साहसिक अभियान सञ्चालन गर्ने किशोरी मुस्कान खातुनलाई प्रतिष्ठित ‘अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला पुरस्कार’ प्रदान गरिने घोषणा गरिएकोमा मुस्कान खातुनलाई हार्दिक बधाई तथा अमेरिकी सरकारलाई धन्यवाद १’ उनले लेखेकी छन् । तेजाब आक्रमणविरुद्ध कडा कानुन र सजायका लागि साहसिक अभियान सञ्चालन गरेवापत खातुनलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला पुरस्कार’ प्रदान गरिने घोषणा गररिएको छ । https://twitter.com/PresidentofNP/status/13680834171752325...
२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार १२:५१२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार १२:५१२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार १२:५१ by Samabeshi KhabarNo Comments
‘मलाई प्रधानमन्त्री बन्ने कुनै पनि लोभ छैन, म प्रधानमन्त्री हुनै चाहान्न’ : देउवा
काठमाडौं, (ससं) । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न लोभ नभएको बताएका छन्। आज शनिबार देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा आयोजित भएको एक कार्यक्रममा देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भनेको वेटिङ प्राइममिनिष्टर भए पनि आफू भने प्रधानमन्त्री पदको पछि नलागेको बताएका हुन्। ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भनेको प्राइममिनिष्टर इन वटिङ हो, तर म त्यसमा पनि छैन हेर्नुस्’, उनले भने, ‘मलाई प्रधानमन्त्री बन्ने कुनै पनि लोभ पनि छैन, लालच पनि छैन। यस्तामा लाग्नु पनि छैन।’ प्रतिनिधिसभा बैठक भोलि बस्दैछ। नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले दर्ता भइसकेको अविश्वास प्रस्ताव अगाडि नबढाई नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीलगायत दलहरूसँग छलफल गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजाने संकेत गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्र...
२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार १२:०१२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार १२:०१२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार १२:०१ by Samabeshi KhabarNo Comments
सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलको बैठक आज बस्दै
काठमाडौं, (ससं) । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि (नेकपा) को संसदीय दलको बैठक आज बस्ने भएको छ । आइतबारदेखि संसद अधिवेशन शुरु हुने भएकाले त्यसमा नेकपा सांसदहरूको भूमिका कस्तो हुने भनेर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनका सांसदहरूलाई बैठकमा बोलाइएको मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले बताएका हुन् । संसद भवनको ल्होत्से हलमा हुने बैठकमा दलको नेता केपी शर्मा ओलीको निर्देशन बमोजिम प्रचण्ड )नेपाल सहित संघीय संसदका नेकपाका सबै सांसदलाई खबर पठाइएको उनले जानकारी दिएका छन् । प्रचण्ड–माधव पक्षले भने शुक्रवारै बैठक बसेर दलको नेता प्रचण्डलाई चयन गरिसकेको छ । नेकपा विभाजन कानुनी रुपमा नभइसकेको अवस्थामा संसदीय दलको नेता केपी ओली बाहेक अरुलाई कानुनले नचिन्ने र दलको नेता हटाउने प्रकियामा अर्को पक्षले विधान बमोजिम कुनै निवेदन समेत नदिएकाले नेकपाको संसदीय दल एउटै रहे...
२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार ११:२१२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार ११:२१२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार ११:२१ by Samabeshi KhabarNo Comments
३६ वर्षअघि पाटनबाट चोरिएको मूर्ति अमेरिकाले नेपाललाई हस्तान्तरण गर्यो
काठमाडौं, (ससं) । ३६ वर्षअघि पाटनबाट चोरी भएको लक्ष्मी–नारायणको मूर्ति अमेरिकाले नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ । अमेरिकाले नेपाललाई उक्त प्राचीन मूर्ति शुक्रबार (हिजो) वासिङ्टनस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित एक कार्यक्रममा हस्तान्तरण गरेको हो । अमेरिकी संघीय अनुसन्धान ब्युरो (एफबीआई) का उपसहायक निर्देशक तिमोथी एन डन्हामले अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत युवराज खतिवडालाई उक्त मूर्ति हस्तान्तरण गरेका हुन् । कार्यक्रममा राजदूत नेपालको प्राचीन मूर्ति फिर्ताका लागि पहल गरेकोमा अमेरिकी सरकारलाई विशेष धन्यवाद पनि दिएका छन् । सांस्कृति सम्पदाको संरक्षणका लागि दुई मुलुकबीच भएको सहकार्यको पनि राजदूत खतिवडाले प्रशंसा गरेका छन् । उनले मूर्ति फिर्ताका लागि पहल गरेकोमा सञ्चारमाध्य, सम्पदाविद् तथा विज्ञहरु, अमेरिकी विदेश मन्त्रालय, एफबीआई, काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावास र डल्लास म्युजियम अफ आर्ट्सलाई पनि धन...